Kedu ihe Mgbakwunye Mgbasa Ozi?
Vidio: Gini bu Mgbasa Ozi Mgbakwunye?
Sọnde, Septemba 23, 2012 Tọzdee, Ọktoba 11, 2012 Douglas Karr
Anyị na-enye ndị ahịa anyị ihe akaebe na ịre ahịa ọwa dị iche iche bụ ụzọ kachasị mma iji rụpụta nsonaazụ na ntanetị niile, ọ bụghị naanị otu. Anyị na e dere banyere ọbịbịa nke Egwuregwu Social, ma ụdị mgbasa ozi gburugburu telivishọn ọdịnala na-agbanwe agbanwe, na-etinye ngwa, teknụzụ mkpanaka na mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a bụ nnukwu vidiyo si BBR / Saatchi & Saatchi na-akọwa mgbasa ozi agbakwunyere.
Tags: mgbasa oziintegratedIntegrated mgbasa ozi
Video: Tallest iPhone Ma
SteelHouse A2: mgbasa ozi mgbasa ozi nke Cross-Platform